ဘော်စတွန်ရဲ့ Fenway အိမ်နီးချင်းအတွက်ခြောက်ပူးပေါင်းကျောင်းများအကြောင်းလေ့လာပါ
သေးငယ်တဲ့ကောလိပ်၏ရငျးနှီးဒါပေမယ့်ပိုကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်၏အရင်းအမြစ်များကိုလိုခငျြတဲ့သူကျောင်းသားများအတွက်တစ်ကောလိပ်လုပ်ငန်းစုကျောင်းများနှစ်ခုစလုံးအမျိုးအစားများ၏အကျိုးကျေးဇူးများပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Fenway ၏ကောလိပ်များအတွက်ပါဝင်ကျောင်းများမှာကြောငျးသားမြား၏ပညာရေးနှင့်လူမှုရေးအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်ပူးပေါင်းကြောင်းဘော်စတွန်ရဲ့ Fenway ရပ်ကွက်အတွင်းခြောက်ကောလိပ်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစုလည်းကျောင်းများအရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်ဆံ့ကူညီပေးသည်။ ကျောင်းသားများကိုများအတွက်အခွင့်အရေး၏အနည်းငယ်အဖွဲ့ဝင်ကောလိပ်များ, ပူးတွဲပြဇာတ်ဘဏ်ဍာ, ခြောက်-ကောလိပ်ပါတီများနှင့်လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များမှာလွယ်ကူသော Cross-မှတ်ပုံတင်ရေးပါဝင်သည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းစု၏အဖွဲ့ဝင်ကွဲပြားခြားနားမစ်ရှင်ရှိသည်နှင့်တစ်ဦးအမြိုးသမီးမြားရဲ့ကောလိပ်ကျောင်းတစ်နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနုပညာကျောင်းသည်နှင့်တစ်ဦးဆေးဆိုင်ကျောင်းတွင်ပါဝင်သည်။ အားလုံးသူတို့ 12000 ကျော်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနှင့် 6,500 grad ကျောင်းသားများအားအိမ်ပြန်များမှာအတူတူ, လေးနှစ်ကောလိပ်များသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျောင်းတိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာပါ:
Emmanuel ကောလိပ်။ Daderot / Wikimedia Commons
တည်နေရာ: ဘော်စတွန်, မက်ဆာချူးဆက်
ကျောင်းအပ်: ထားသော 2,201 (ထားသော 1,986 ဘွဲ့ကြို)
School တွင်အမျိုးအစား: ကက်သလစ်လစ်ဘရယ်အနုပညာကောလိပ်
ဘာသာဂုဏ်ထူး: 13 1 ကျောင်းသား / ဒြေအချိုး ; 20 ပျမ်းမျှအားအတန်းအစားအရွယ်အစား; 50 ကျော်ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ; ခိုင်မာတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အဝေးရောက်အစပျိုး; ကျောင်းသား 90% ကျော်တစ်ဦးအလုပ်သင်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်; 100 ကျော်ကလပ်အသင်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူတက်ကြွစွာကျောင်းဝင်းဘဝ
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဝင်ခွင့်များဒေတာအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် Emmanuel ကောလိပ်ပရိုဖိုင်းကို
အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်း၏မက်ဆာချူးဆက်ကောလိပ်။ soelin / Flickr ကို
ကျောင်းအပ်: 1,990 (ထားသော 1,879 ဘွဲ့ကြို)
School တွင်အမျိုးအစား: အနုပညာအများပြည်သူကျောင်းကို
ဘာသာဂုဏ်ထူး: အမေရိကန်အတွက်အနည်းငယ်လူသိရှင်ကြားရန်ပုံငွေအနုပညာကျောင်းများ၏တဦးတည်း;91 မှကျောင်းသား / ဒြေအချိုး; ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အနုပညာဆရာမပညာရေးအတွက်လူကြိုက်များအစီအစဉ်များ; အနုပညာရဲ့ပြတိုက်အနီးရှိ; မှတဆင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အားကစားအစီအစဉ်များကို အီမာဆန်ကောလိပ်
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဝင်ခွင့်များဒေတာအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် MassArt ပရိုဖိုင်းကို
MCPHS ။ DJRazma / ဝီကီပီးဒီးယား
ကျောင်းအပ်: 7,074 (3,947 ဘွဲ့ကြို)
School တွင်အမျိုးအစား: ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာရုံနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကကောလိပ်
ဘာသာဂုဏ်ထူး: Worcester, MA နှင့်မန်ချက်စတာ, နယူးဟမ်းရှားအတွက်အပိုဆောင်းကျောင်းခွဲ; အဆိုပါ Longwood ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာဧရိယာဆက်စပ်ကျောင်းကို; အသက် 30 ဘွဲ့ကြိုနှင့် 21 ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များ; လူကြိုက်များဗိုလ်ကြီးဆေးဆိုင်, သူနာပြု, ပါးစပ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့် Pre-Med ပါဝင်သည်; 16 1 မှကျောင်းသား / ဒြေအချိုးအစား
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဝင်ခွင့်များဒေတာအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် MCPHS ပရိုဖိုင်းကို
Simmons ကောလိပ်မှာလူနေအိမ်ကျောင်းပရဝုဏ်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ကျောင်းအပ်: 5,662 (1,743 ဘွဲ့ကြို)
School တွင်အမျိုးအစား: အမြိုးသမီးမြားရဲ့လစ်ဘရယ်အနုပညာကောလိပ်
ဘာသာဂုဏ်ထူး: အတွေထဲက ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးကောလိပ် ; NCAA Division III အားကစားအစီအစဉ်များ;71 မှကျောင်းသား / ဒြေအချိုး; ဘွဲ့ကြိုအဆင့်မှာခိုင်မာတဲ့သူနာပြုအစီအစဉ်ကို; အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဘွဲ့ရစာကြည့်တိုက်သိပ္ပံအစီအစဉ်ကို; အွန်လိုင်းဘွဲ့ရအစီအစဉ်များမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာတိုးချဲ့ပါပြီ
အဆိုပါကျောင်းပရဝုဏ် Explore: Simmons ကောလိပ်ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဝင်ခွင့်များဒေတာအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် Simmons ကောလိပ်ပရိုဖိုင်းကို
နည်းပညာတက္ကသိုလ် Wentworth Institute က
နည်းပညာတက္ကသိုလ် Wentworth Institute မှ။ Daderot / Wikimedia Commons
ကျောင်းအပ်: ထားသော 4,576 (4,324 ဘွဲ့ကြို)
School တွင်အမျိုးအစား: နည်းပညာဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာ chollege
ဘာသာဂုဏ်ထူး: 15 1 ကျောင်းသား / ဒြေအချိုး; ဘွဲ့ကြိုဗိုလ်ကြီး 15 ပျမ်းမျှလူတန်းစားအရွယ်အစား; ကျောင်းသားများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်, paid လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရရှိနိုင်အောင်ကြီးမား Coop အစီအစဉ်ကို; ဗိသုကာ, စက်မှုအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လူကြိုက်များအစီအစဉ်များ; NCAA Division III အားကစားအစီအစဉ်ကို; Dorchester အတွက်တွဲဖက်ဒီဂရီကျောင်းခွဲများနှင့်မြစ် Fall
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဝင်ခွင့်များဒေတာအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် Wentworth ပရိုဖိုင်းကို
Wheelock မိသားစုကဇာတ်ရုံ။ ယောဟနျသ Phelan / Wikimedia Commons
ကျောင်းအပ်: 1,169 (811 ဘွဲ့ကြို)
School တွင်အမျိုးအစား: အသေးစားပုဂ္ဂလိကကောလိပ်
ဘာသာဂုဏ်ထူး: ကလေးများနှင့်မိသားစုများ၏ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအပေါ်ခိုင်မာတဲ့အာရုံစိုက်; 10 1 မှကျောင်းသား / ဒြေအချိုး; လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မူလတန်းပညာရေးအတွက်လူကြိုက်များအစီအစဉ်များ; NCAA Division III အားကစားအစီအစဉ်ကို; အဆိုပါလုပ်ငန်းစုအတွက်ကောလိပ်များရဲ့အသေးငယ်ဆုံး
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဝင်ခွင့်များဒေတာအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် Wheelock ပရိုဖိုင်းကို
အဆိုပါ Fenway Consortium ၏ကောလိပ်များအခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်: ကတတည်နေရာင် နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးကောလိပ်မြို့များ ။ ဘော်စတွန်ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်မယ့်ကြီးမြတ်နေရာဖြစ်၏, သင်ကျောင်းသားများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာမြို့လယ်အနည်းငယ်မိုင်အတွင်းအဖွဲ့အစည်းများများစွာမှာရှိပါတယ်ကြောင်းတွေ့ရှပါလိမ့်မယ်။ အခြားဧရိယာကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များ၏အချို့တို့ပါဝင်သည်:
Babson ကောလိပ် (စီးပွားရေးလုပ်ငန်း)
Oline ကောလိပ် (အင်ဂျင်နီယာ)
ပြည်သူ့တက္ကသိုလ်များတကယ်ပဲပုဂ္ဂလိကကောလိပ်များထက် သာ. ကောင်း၏ Value ကိုဖြစ်ပါသလား
အဆိုပါ Claremont ကောလိပ်များ
အိုငျးရစျအမေရိကန်ပြည်သူ့အင်အားအကြောင်း 8 စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းများ
လက်သမားပုရွက်ဆိတ်တွေ, Genus Camponotus
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: Gettysburg - တိုက်ပွဲပြည်ထောင်စုအမိန့်
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းအတွက်ငွေ Worth လား?
သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်: အဆုတ်နှင့်စနစ် Circuits
သင်ကလာရောက်လည်ပတ်မယ့် (သို့သော် Be နေရမည်) ထိပ်တန်း 10 စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘလော့များ
စပိန်ကြိယာ Quedar အသုံးပြုခြင်း
Jizo Bosatsu နှင့်သူ၏အခန်းက္ပ
အဆိုပါ Lab ကအတွက်ဖန်ပြွန်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မည်သို့